Waa tan sida loo helo ugxanta ugu fiican - New York Times - teles relay
Waa tan Sida Loo Helo Ukunta Ugu Fiicantahay - The New York Times
Dhamaanteen waxaan la yaabnay tayada kareemada ee ukunta dhaadheer ee isku dhafan, oo si fiican loo shiiday, ka dibna waxaan go'aansanay in 15 daqiiqo oo qiiro joogto ah ay tahay wax aan kaliya diyaar u nahay inaan sameyno munaasabadaha ku baaqaya kuwa ugu jilicsan kuwa yaryar.
Ukuntayda isku dhafan maalmaha shaqada waa in la kariyo waqtiga loo baahan yahay in la dubto jeex rooti ah. Aniga oo taas maskaxda ku haya, ayaan isweydiiyay: weli ma suurtagalbaa in la kariyo ukunta la dubay sida kareemka iyo jilicsanaanta aad rabto, iyo ka sii muhiimsan, kareemka iyo calalinta haddii aad ka doorbideyso iyaga jilicsan, dhexdhexaad ah ama xitaa si adag loo xoqay
Sida suxuunta ukunta badan oo fudud, ukunta la shiiday waxay ku fiican yihiin tijaabooyin xoog leh (iyo ra'yi).
Marka hore, xoogaa aasaasi ah: Ukuntu badanaa waa biyo, oo leh qaddar borotiin iyo dufan leh. Marka ukunta lagu xoqay kuleylka, borotiinadooda - ugu horrayn ovalbumin iyo ovotransferrin - waxay bilaabaan inay diidaan oo ay is dhex galaan, iyagoo sameysma matrix jilicsan oo qoyaan ku dhejiya. Kuleylka borotiinadani waa ka badan yihiin oo kolba marka la kariyo, ayaa in badan oo ka mid ah jajabka ayaa adkeynaya, illaa qoyaanka uu bilaabmayo inuu ka baxsado, sida isbuunyo la ruxay. Markaa waxay umuuqataa furaha ukunta inay ahaato mid jilicsan oo qoyan waa in la maareeyo heerka ciriiriga borotiinadan.
Heerkulka hore ee digsiga wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa culeyska ugxan ee u dambeeya. Digsiga kulul wuxuu u horseedi doonaa abuur deg deg ah uumiga isku darka ukunta, isagoo ku dari doona qalafsanaan wuxuuna siinayaa tayo jilicsan, halka ukunta lagu furay digsi qabow ay ahaan doonto cufnaan iyo kareem inta lagu jiro karinta. Waxaan jeclahay ukumehayga meel dhexe: inta badan kareem leh xoogaa khafiif ah, curds jilicsan oo dhexgalay. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan la helin heerkulbeegga infrared, way adag tahay in la cabbiro heerkulka digsiga.
Hal shaqo oo aan ogaaday ayaa ah in aan dheriga ku kululeeyo kuleyl dhexdhexaad ah oo ay biyo yar ku jiraan, kuna wareegaan markii biyuhu uumi baxayaan. Biyahaani waxay ka soo jiidan doonaan tamar dheriga dushiisa ilaa ay ka wada baxayaan gebi ahaanba, markaasi oo aan ogahay in dusha dherigu uu haatan ka sarreeyo 212 digrii Fahrenheit, oo ah barta kuleylka ah.
Ka warran cusbada? Cunto kariyeyaasha qaarkood waxay ku adkaysanayaan inaadan cusbo ukuntiinna ilaa ay ku dhowdahay inay karsadaan, halka kuwo kalena ay kugula talinayaan inaad milixdo intaad garaacayso. Cusbadu waxay jebin kartaa qaar ka mid ah borotiinka ukunta. . qoyaanka sifiican haysaa ugana jilicsan ugxanta aan cusbada lahayn. Cusbo ukunta oo u oggolow inay fadhiistaan ​​intaad kafee kafee wanaagsan tahay, laakiin xitaa cusbaynta waxyar ka hor intaan la karin ayaa kaa caawin kara.
Dufanka, oo laga helo jaallo, wuxuu kaloo kaa caawin karaa jilicsanaanta. Molekuyuleetiyada dufanka ahi waxay u yara dhaqmi karaan sida bouncers-yada jir ahaan u kala saara borotiinka runti doonaya inay isku milmaan. Maalmahayga sida quraacda loo kariyo Park n ° 9 Magaalada Boston, Jason Bond, oo xilligaas ahaa kuugga cuntada, wuxuu igu darsaday dersin dheeraad ah oo beedka jaallaha ah labadii dersin ee ugxan la jeexjeexay, taasoo dhalisay ukun qoto dheer oo liidata iyo ukumo aan caadi ahayn. (Guriga dhexdiisa, wax dhibaato ah kuma qabo maadaama aan marar dhif ah ugu isticmaalo ukunta beekhaamiska ah).
Kariim culus ama xitaa crème fraîche waxay lahaan karaan shaqo la mid ah, laakiin waxaan doorbidaa inaan isticmaalo subagga. Isaga oo ku yaal Brookline, Mass., Dukaanka rootiga ee loo yaqaan 'Cutty', saaxiibkey Charles Kelsey wuxuu isku daraa ukumo cayriin leh sabdo ku jira isku dhafan xoog leh ka hor inta uusan xoqin oo uusan ku xirin sandwiches ukunta. Farsamadeeda waxaa laga soo qaatay kuugga Daniel Boulud, oo, wareysi uu la yeeshay Francis Lam 2008, soo jeediyay in lagu daro ukubyo yar yar oo subag ah ukunta markii la sameynayo omelet Faransiis. Mar aan wacay, Mr. Boulud wuxuu ii sheegay inuu farsamadan ku bartay da 'yarta wax karinta ee Lyon, France, iyo in badanaa lagu isticmaalo maqaayadaha, halkaas oo subagga lagu dari karo.si loo maareeyo heerkulka ukunta markay bilaabayaan dhigid
Farsamadu waxay u shaqeysaa waxyaabo yaab leh ukunta la duubay. Marka isku darku kululaado, badankood waxay bilaabi doonaan inay curdiyaan sidii caadiga ahayd, laakiin ukuntaha ku xeeran xabbadahaas subagga ah ayaa la qaboojiyey, taasoo ka dhigaysa inay si tartiib ah u fadhiyaan. (Markii hore xitaa waxay umuuqataa inaysan subaguna dhalaali doonin ilaa ukunta la kariyo, laakiin kalsoonida ayaa fure ah!) Markuu subagga dhalaalayo, wuxuu isku dhex daraa ukunta jilicsan ee sameysata suugo. Hodan iyo subag isku jira iskuna jajabiya curd.
Hase yeeshe, xitaa iyada oo dhammaan farsamooyinkan, weli waxaa jira halista ah in si shil ah loo kariyo ukunta, aad loo adkeeyo curdanka iyo qoyaanka, oo waxay ku dhici kartaa ilbidhiqsiyo. Ma jirtaa wado lagu yareyn karo tan?
Kristen Miglore oo ka mid ah cuntooyinka 'Genius Recipes' ee loo yaqaan 'Food52' ayaa ii soo diray habeyn laga sameeyay 2015, "Ukunta Labaad ee Sixirka Labaad" laga bilaabo Mandy Lee's Blog Blog, Lady & Pups. Intii lagu guda jiray wicitaanka Zoom ee ka socda Taiwan, Ms. Lee waxay sharraxday inay ku timid howsha si shil ah, iyadoo isku dayaysa inay quudiso eeydeeda jiran ee ay cunayso. Waxay isticmaashay ukumo, biyo iyo galley isku jir ah. Intii aad karinaysay isku dar ah, waxay ogaatay sida kareemku ugu sii jiro, xitaa marka ukunku jiifaan. Halkaas, iyadu waxay tijaabisay oo waxay ogaatay in taabashada boorashka galleyda lagu daro ukumo ukunteeda ku jirta ay u ilaaliso kareem iyo jilicsan, xitaa marka si dhakhso leh loogu kariyo kuleylka badan. (Maalmahan, waxay kugula talineysaa inaad isticmaasho baradhada ama istaarijka istaroogga, oo ka hawlgala heerkul hoose isla markaana soo saarta natiijooyin waxoogaa yar ka gaagaaban marka loo eego galleyda.)
Farsamadu runtii way fiican tahay, boorashka istaarijiyaddu wuxuu u adeegaa ujeedo laba-geesood ah. Sida baruurta oo kale, istaarjku jidh ahaan wuu horjoogsan karaa isku xidhka borotiinka. Isla mar ahaantaana, dhagaxyada istaarjku way bararaan marka qoyaan lagu kululeeyo, iyaga oo ku xidha qoyaankaas kana ilaaliya inay baxsadaan. Waxaad ugaga tagi kartaa ukunta dusha sare 30 ilbiriqsi oo dheeri ah, welina kuma adkaan doonaan mana qalajin doonaan sida ugxanta la shiiday ay badanaa sameeyaan.
Istaar iyo ukunta kuma cusba Shiinaha. Cunto kariyihii reer Malaysiya-Ustaraaliya Adam Liaw wuxuu kugula talinayaa yaanyo yaanyo casiir leh in lagu kariyo boorash istaarji ah kahor intaan lagu darin ukunta khafiifka ah ee la duudduubay. Ukunta shiilan ee shiidan oo yaanyo leh, Siinta saxanka xariir jilicsan oo raaxo leh. Iyo, inta lagu jiro imtixaannada maraq ukun la garaacayWaxaan ogaaday in ku darida boorash galleyda ah ukunta intaan la garaacin oo aan lagu shubin maraq kulul inay ka caawinayso inay udgoonku ahaato mid qoyan oo jilicsan markay sii adkaanayaan.
Waxaan la xiriiray saaxiibaday Steph Li iyo Chris Thomas kanaalka kanaalka Cunnooyinka shiineyska ayaa la caddeeyay, Kuwaas oo adeegsada farsamo lamid ah Cantonese iskudhiska ukunta (oo kusalaysan saxanka loo yaqaan "Whampoa Eggs" oo caan ku ah Guangzhou laakiin aan aad looga aqoon Galbeedka). Waxay sharraxeen in istaarjku caadi ahaan lagu daro cuntada yaryar ee foojignaanta ah ee foojignaanta si loo ilaaliyo jilicsanaanta omelet.
In kasta oo isku darka istaarijka iyo ukunta ay ku badan tahay diyaargarowga kala duwan ee Shiinaha, waxay qaadataa nolol cusub markii lagu daro Mr. Boulud subagga qabow iyo habka ugu yar ee uumiga si aan uga cabbiro heerkulka saxda ah. Ruxitaan dheer ayaa loo hayn karaa dhamaadka usbuuca, laakiin hadda xitaa ukuntayda subaxnimada maalinta ee usbuuca waxay noqon kartaa mid jilicsan oo jilicsan sida aan doonayo.
Cunto: Ukun badan oo la shiilay
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore (Ingiriis) https://www.nytimes.com/2021/02/19/dining/perfect-scrambled-eggs.html
isku darsamaycommentLESugu fiicanheliukuntaTimesHALKAN
TELES RELAY 40648 posts 1 comments
#Birthday - Maanta, Sukru ozyildiz wuxuu noqonayaa 33 jir Wuxuu ciyaaray doorka Amiirka ee #UneQuestionDhonneur!
Shaqaalaha Man Utd ayaa lagu qasbay inay karantiilaan